ည၈နာရီကျော်လောက်က သင်္ကန်းခြုံထားတဲ့ ကိုရင်လေးကသင်္ချိုင်းကုန်းထဲ ဝင်သွားလို့ လိုက်ကြည့်လိုက်သောအခါ – Alanzayar
ည၈နာရီကျော်လောက်က သင်္ကန်းခြုံထားတဲ့ ကိုရင်လေးကသင်္ချိုင်းကုန်းထဲ ဝင်သွားလို့ လိုက်ကြည့်လိုက်သောအခါ
မနေ့ည၈နာရီ ကျော်ကျော်ဆလောက်က ကျနော် လက်ဖက်ရည်သောက်ဖို့ သောက်နေကျ ဆိုင်ထဲ ကိုဝင်လိုက်တယ်….. ထိုင်ခုံကမရှိတော့ ကိုရင်လေး ထိုငိနေတဲ့ စားပွဲမှာပဲ ဝင်ထိုင်လိုက်တယ် စားပွဲထိုး ကောင်မလေးက ကျနော့်အတွက် ….လက်ဖက်ရည်ခွက် ချပေးနေတုန်း ကိုရင်လေးက မေးလိုက်တယ်….
ဒကာမလေးး ကိုရင်မှာထားတာ ကြာပီလေ မရသေးဘူးး လားတဲ့….. ကျနော်လည်းး မနေနိုင်မထိုင်နိုင် မေးလိုက်မိတယ်….ကိုရင်က ဘာမှာ ထားတာလဲလို့….. ချိုစိမ့်နဲ့ ပဲနံပြား မှာထားတာ …..အဲဒါနဲ့ ကျနော်လည်းး ပြန်မေးလိုက်တယ်…..ကိုရင်က ဒီအချိန်စားလို့ မရဘူးလေ ဆိုတော့….မဟုတ်ဘူးး အမေ့အတွက်တဲ့ ….. လက်ဖက်ရည်ခွက် ချပေးနေတုန်း ကိုရင်လေးက မေးလိုက်တယ်…. ဘယ်ပြန်မှာလဲ ဆိုတော့ အပြန် လမ်းကြုံတာနဲ့ ခေါ်ခဲ့ရော….
မြို့ရှောင် လမ်းထဲ ရောက်တော့ ဘယ်ဘက်ကို ချိုးဝင်ခိုင်းတယ် ပြီးတော့ သင်္ချိုင်းကုန်းထဲ ဝင်ခိုင်းတယ်ဗျာ….ကျနော် တော်တော် လန့်သွားတယ် ညက၈နာရီကျော်ပီလေ ….. သင်္ချီုင်းကုန်း ဆိုတာ တိတ်ဆိတ်နေတာ ကြက်သီးတွေ တဖြန်းဖြန်း ထလာတယ် ဒါပေမယ့် ကျနော် ကြောက်စိတ်ကို ဖယ်ပြီးတော့ သင်္ကန်းခြုံထားတဲ့ ကိုရင်လည်းပါတယ် ဆိုပီး အားတင်း ဝင်လိုက်တယ်…..
အဲဒီမှာ ကိုရင်က ဆင်းပီး ဓါတ်မီးလေးနဲ့ ဟိုကြည့် ဒီကြည့်ကြည့်ပြီး….. အုပ်ဂူလေးးတစ်လုံး ပေါ်တက်ထိုင်ပြီး …… အမေ အမေကြိုက်တဲ့ ချိုစိမ့်ရယ် ပဲနံပြားရယ်…. သားလာပို့တာပါ သားကို ခွင့်လွှတ်ပါအမေရယ်တဲ အမေမသေခင်တုန်းက မပြုစုခဲ့ရတာတွေ…. သားအခုမှ ယူကြုံးမရ ဖြစ်နေပြီ အမေရယ်တဲ့ အဲလိုတွေပြောပြီးတော့ ကိုရင့်က အဲ့ဒါကို ရင့်အမေရဲ့ အုပ်ဂူလေးပဲတဲ့…..
မသေခင်တုန်းက လုပ်မကျွေးနိုင်ခဲ့လို့ အခုလာပို့တာပါလို့ သူပြောတဲ့ စကားနားထောင်းရင်း…. ကျနော် သူ့ကျောင်းထိ ပြန်လိုက်ပို့ ပေးလိုက်ပါတယ်….ကျနော် သံဝေဂတစ်ခု ရ လိုက်တယ်….. သူတောင် သေသွားတဲ့ မိခင်ကို သ င်ချီုင်းကုန်ထိ လိုက်ကျွေး နေသေးတာ….
ငါတို့က အခုအသက်ရှိနေတဲ့ မိခင်ကို ပိုတောင် ဂရုတစိုက် ကျွေးသင့်တယ် ဆိုတဲ့ အသိတရား ရလိုက်ပီလေ….. ကိုယ့်ကို မွေးပေးတဲ့ မိခင်ဆိုတာ တစ်သက်လုံး တစ်ယောက်ပဲ ရှိတာမို့…. အစားထိုးးမရတဲ့ အနန္ဒဂိုဏ်းဝင် ကျေးဇူးရှင်ကို အသက်ရှင်နေတုန်း….. လုပ်ကျွေးသမှု ပြုကြရင်းနဲ့ ကျေးဇူးး ဆပ်ကြရအောင် သူငယ်ချင်းတို့ရေ အခုတော့….. ကျနော်ရယ် ကိုရင်ရယ် သင်္ချိုင်းက ငြိမ်သက်နေတဲ့ အုပ်ဂူလေးးရယ်……။ Credit
Previous Article မင်းသမီး.. Tangmo .. ရေထဲပြုတ်ကျသည့်အကြောင်းရင်း ဆရာဂျေဂျေ ရှင်းပြ(ရုပ်သံ)
Next Article ဟုမ္မလင်းတွင် ခရီးသည်က လက်ဆော့ပြီး လေယာဉ် အရေးပေါ် တံခါးကို ဖွင့်မှုဖြစ်